शुक्रबारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुको साथै शुख, शान्ति र संबृद्धी प्राप्त हुने - Sudur Khabar
शुक्रबारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुको साथै शुख, शान्ति र संबृद्धी प्राप्त हुने
शुक्रबारका दिनलाई सुखद अनि रमाईलोका साथ दिन बिताउन चाहानुहुन्छ भने यी टिप्सहरु अपनाउनुहोस … शनिबारको दिन फलामको समान किन्नु हुदैन। किनकि यसले घरमा दरिद्रता पैदा हुन्छ। धनको हानी हुन्छ। आर्थिक समस्या पैदा गर्छ। कुनै समान या बस्तु किन्दा हामी कुनै कुराको ध्यान नदिई किन्ने बानीले घरको सुख शान्ति हटाईदिन्छ। यस्तै आज शुक्रबारको दिन कुन बस्तु किन्दा हाम्रो भाग्य चम्किन्छ र शुभ हुन्छ भन्ने बारे जानकारी गराउदैछौ।
शुक्रबारको दिन किन्नुहोस यी बस्तु
१, लक्ष्मी माता र गणेशको फोटो, मुर्ति वा सिक्का बिशेष गरि शुक्रबारको दिन किनेर घरमा ल्याउनु होस्। यसो गर्दा घरमा पैसाको कमि कहिले हुदैन।
३, यस्तै स्टिल, पित्तल र सिलाबरका भाडाकुडाहरु शुक्रबारको दिन किन्नुहोस यसो गर्नाले ग्रह दशा हटेर जान्छ।
३, ५ कौडा र ११ घुम्ती चक्रलाई किनेर पहेलो कपडामा राखेर जहाँ तपाई पैसा राख्नु हुन्छ त्यहाँ राख्नुहोस। यदि तपाइको पसल छ भने पैसा राख्ने ठाउमा यो राख्नु होस् यसबाट तपाइको व्यापार व्यसाय बढ्छ।
४, कारोबार लेख्ने कापी शुक्रबारको दिन किन्नु होस्। दुई हात जोडी हे देव खाता मेरो व्यापार व्यवसाय राम्रो गरिदेउ भन्दै प्राथना गर्नुहोस। यसो गर्दा तपाइको व्यापार व्यवसायमा मत लक्ष्मीको कृपा मिल्छ ।
५, शुक्रबारको दिन इलेक्ट्रोनिक समानहरु किन्नु एकदम शुभ मानिन्छ यसो गर्दा आर्थिक समस्या कम भएर जान्छ समान टिकाउ पनि हुन्छ।
के तपाईं लाई थाहा छ, पार्टनरले धोका कुन दिनमा बढी दिन्छन् ? थाहापाउनुहोस्
एजेन्सी । के धोखा दिनलाई पनि कुनै मुहुर्त हुन्छ ? के मानिसले कुनै दिन, बार, गते, कति बजे तथा तिथि हेरेर आफ्नो प्रियजनमाथि धोकाधडी गर्दछ ? वास्तवमा यो मान्छेको चरित्र वा मौका आदिमा भर पर्दछ । एक डेटिङ वेबसाइटले यही विषयमा अध्ययन गरेर एउटा रोचक निष्कर्ष निकालेको छ ।बेलायतको चर्चित वेबसाइट इलिसिट इन्काउन्टर्सका अनुसार हप्ताको सोमबार र शुक्रबार मानिसहरुले आफ्नो पार्टनरलाई सबैभन्दा धेरै मात्रामा धोका दिन्छन् ।
अझ सोमबार बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म र शुक्रबार राति ९ देखि १० बजेसम्म । डेटिङ वेबसाइटले बिवाहेत्तर सम्बन्धमा रहेका आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुले गर्ने मेसेजको विश्लेषण गरी यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । कामकाजको समयतालिका तथा परिवारको मागका कारण उक्त दिनहरुको त्यस समयमा पार्टनरहरुमाथि बढि धोकाधडी हुने गरेको निष्कर्ष उक्त डेटिङ साइटले निकालेको छ ।
शनिबार र आइतबार विदा हुने र विदाको दिनहरुमा परिवारसँग समय बिताउनु पर्नाका कारण सोमबार हुने बित्तिकै मानिसहरु आफ्नो अर्को अवैध सम्बन्धवाला मानिससँग सम्पर्क राख्दछन् । शुक्रबार रातिको हकमा चाहीँ अब सप्ताहन्तका दुई दिन भेट गर्न नपाइने भयो भन्दै आफ्नो अवैध पार्टनरसँग भेट्ने वा कम्तिमा पनि कुराकानी गर्नका लागि उनीहरुले शुक्रबार राति ९ देखि १० बजेको समयमा बढी भन्दा बढी मेसेज गरिरहेका हुन्छन् ।
यदि गोजीबाट अचानक पैसा झर्यो भने सम्झिनुुस् कि चाँडै नै तपाईलाई यस्तो हुँदैछ..
एजेन्सी । धेरैपल्ट तपाईले प्यान्ट वा गोजीबाट रुमाल या पर्स निकाल्दै गर्दा त्यतिखेर नोट वा सिक्का झर्नेगर्छ । त्यस्तै कतिपल्ट तपाईले सर्ट वा कमिजको खल्तीबाट पेन वा कुनै कागज निकाल्दा तपाईको खल्तीबाट सिक्का वा नोट झर्छ । यो तपाइलाई
सामान्य कुरा लाग्नसक्छ तर यसको पछाडि कैयौँ शुभ संकेत लुकेको हुन्छ ।
यदि तपाईसँग पनि यस्तो भयो भने यसको मतलब यो हुनेछ कि चाँडै नै तपाईलाई धनप्राप्ति हुनेछ । यदि तपाईले कसैलाई पैसा दिन लागेको बेलामा नोट वा सिक्का हातबाट छुट्यो भने यसले शुभफल मिल्नेछ ।
तर यो सबै अचानक भए मात्र तपाईलाई यसको फल मिल्नेछ । यदि तपाईले जानीजानी पैसा झार्नुभयो भने तपाईलाई यसको फल मिल्नेछैन ।
विद्धानका अनुसार यदि कपडा लगाउन लागेको बेलामा तपाईको पकेटबाट सिक्का वा नोट झर्यो भने यो सम्झिनुस् कि तपाईलाइ चाँडै नै धनप्राप्ति हुनेछ । तर यसके असर कहिलेसम्म रहन्छ त्यसको निश्चित समय भने तोकिएको छैन ।
किन घट्दैछ श्रीमान-श्रीमतीवीच आत्मीयता ?
नारी-पुरुष एक अर्काका परिपूरक हुन् । नारी पुरुषबीचको सम्बन्ध बिना यो सृष्टि नै असम्भव छ । भनिन्छ, नारीपुरुष अर्थात् श्रीमान श्रीमती एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । यात्राका क्रममा रथ चलाउन दुबै पाङ्ग्रा आवश्यक पर्दछ । एक पाङ्ग्रा मात्र प्रयोग भयो भने यात्रा अधुरै रहन्छ । अर्थात् त्यो यात्रा अपुरो रहन्छ ।
श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध भनेको दुवै शरीर एक हुनु हो। जहाँ लाज, घीन पनि पचिसकेको हुन्छ । वैवाहिक जीवनमा चरम सुख छ । जहाँ माया र समझदारीले भरिएको वैवाहिक सम्बन्ध छ, त्यहाँ स्वर्ग खोज्न कहीँजानुपर्दैन ।
एक श्रीमान-श्रीमतीबीच संवेगात्मक, भावनात्मक यौनिकता जीवनका अधिकांश मिठास अर्थात् चरम आनन्द त्यही सम्बन्ध भित्र पाउन सकिन्छ । जहाँ प्रेममय सम्बन्ध हुन्छ,त्यहाँ श्रीमतीलाई दुख्यो भने श्रीमानले त्यो दुखाइको महसुस गर्छ । श्रीमानलाई दुख्यो भने श्रीमतीले त्यो दुखाइको महसुस गर्दछिन् । सम्पन भएको अवस्था होस् अथवा विपन्न भएको अवस्था होस् त्यो दुःखसुख दुवै श्रीमान श्रीमतीको साझेदारी हुन्छ ।
तर, अहिलेका अधिकांश वैवाहिक जीवनमा भावनात्मक सम्बन्धमा कमी हुँदै गइरहेको पाइन्छ । हाम्रो समाजको परिवेशको वैवाहिक जीवनमा हेर्दा २० प्रतिशत वैवाहिक सम्बन्धमा पूर्ण सन्तुष्टि छन् । अरु २० प्रतिशत सम्झौता र समझदारीमा चलेकै छन् । र, अरु ६० प्रतिशत वैवाहिक जीवन असन्तुष्ट बिताइरहेका छन् ।
कतिपय वैवाहिक सम्बन्धहरु भावनात्मक नभएर औपचारिकतामा सीमित छन् । अहिलेको विज्ञानको चमत्कारी युगमा अति आधुनिक सञ्चार माध्यम, मद्यपान, अभाव, आधुनिकता, व्यस्तताले वैवाहिक जीवनमा पनि भावनात्मक सम्बन्धमा न्यूनता ल्याएको छ ।
वैवाहिक जीवनमा आत्मीयतामा कमी आउनुका केही कारणहरु यस्ता छन्-
प्रायः धेरैजसोलाई अहिलेको भौतिकवादी सोच र अति महङ्गीमा घर व्यवहार चलाउन निक्कै मुस्किल छ । मानिसहरु पैसा कमाउन निक्कै भागदौड गरिरहेको अवस्था छ । प्रायःजसो श्रीमान श्रीमती नै काममा व्यस्त छन् । घरपरिवारलाई समय दिन नसक्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
भावनात्मक ऊर्जा हुनका लागि पनि समयको आवश्यकता पर्दछ । व्यस्त अवस्थामा मानिसहरुको ध्यान कामतिर मात्र केन्द्रित हुँदा भावनात्मक ऊर्जामा कमी आउँछ । अहिलेको व्यस्तताको कारणले पनि वैवाहिक जीवनमा भावनात्मक सम्बन्धमा कमी ल्याइरहेको छ ।
कतै अभावले भावनात्मक सम्बन्धलाई अवरोध पुर्‍याएको छ। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा जताततै, जेसुकैको अभावै अभाव छ ।
मानिसको पहिलो प्रथामिकतामा रहेको गाँस,बास, कपासकै अभावमा तड्पिनेको सङ्ख्या पनि निक्कै छ। त्यसमा पनि महँगीले आकाश छोएको छ ।
भ्रष्टाचार नगर्ने कर्मचारीहरुलाई तलबले महिना दिन टार्न निक्कै कठिन छ । छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाले अधिकांशलाई निक्कै भारी बनाएको छ र तनाव थपिदिएको छ ।
अभावै अभावको कारणले तनाव सिर्जना हुन्छ । जब अभावका कारण तनाव सिर्जना हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीबीच झगडा उत्पन्न हुन्छ र एक सुन्दर वैवाहिक जीवनभित्र आत्मीयताको कमी उत्पन्न हुन्छ ।
अभावकै कारण कतिपय वैदेशिक रोजगारीले पनि श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धलाई चिसोपन ल्याएको छ । देशमा गरिबी बेरोजगारी बढेपछि अहिलेको समयमा ४० लाख युवायुवती विदेशिएका छन् । लामो समय वैदेशिक रोजगारमा रहँदा श्रीमान श्रीमती अलग रहनुको कारण धेरैजसोको भावनात्मक सम्बन्ध टुटेको यथार्थ छ ।
सूर्य अस्त, नेपाली मस्त भन्ने भनाइ नै छ । यही भनाइ वास्तविक साबित हुन्छ । हाम्रो समाजमा धुम्रपान मद्यपान गर्नेको सङ्ख्या ठूलै छ । मदिरा अर्थात् जाँडरक्सीले खासै फाइदा पुर्‍याएको देखिँदैन । आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व नै बिर्सिएर रक्सीमा तल्लीन हुनेको सङ्ख्या पनि निक्कै छ ।
जाँड रक्सीले कतिलाई त करोडपतिबाट रोडपति बनाएको यथार्थ छ । हरेक दिन रक्सीका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि धेरै छ । कतिले त रक्सीकै कारण रोगको उपहार लिएर तड्पिरहेका छन् । रक्सीको उन्मादमा हिंसात्मक घटनाहरु भइरहेका छन् ।
वैवाहिक जीवनमा आत्मीयता नहुनु भनेको घर बिग्रिनु हो । घर बिग्रिनु भनेको छोराछोरी बिग्रिनु हो । भोलिका कर्णधार बिग्रिनु भनेको समाज बिग्रिनु हो । र, समाज बिग्रिनु भनेको राष्ट्र बिग्रिनु हो
रक्सी पिउनेहरुका श्रीमतीहरु जहिले पनि पीडित देखिन्छन् । धेरैजसो मद्यपान अर्थात् रक्सीका कारणले महिलाहरुले घरेलु हिंसा खेप्नु परिरहेको छ । दिनै रक्सी पिएर पैसाको पनि नास, ज्यानको पनि नाश र घरमा झैझगडा एवं हिंसात्मक क्रियाकलापले वैवाहिक सम्बन्धमा ठूलै क्षति पुर्‍याएर आत्मीयतामा भङ्ग गरेको अवस्था छ ।
४) शिक्षा र स्वतन्त्रता
अहिलेका नारी पुरुष समान रुपमा शिक्षित हुँदै गइरहेको समयमा श्रीमान श्रीमती आआफैँमा सक्षम हुँदै गहिरहेका छन् । अहिलेको शिक्षित वर्गहरु जीवन आफ्नै तरिकाले बाँच्न चाहन्छन् । हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा युगौँदेखि महिलालाई दमन शोषण एवं दासका रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए ।
नारीहरुले श्रीमानलाई भगवानसरी पुज्दै आएका थिए । तर, अहिलेको शिक्षित वर्गमा महिलाहरु नदबिनुको कारण पनि वैवाहिक जीवनमा आत्मीयता घटाएको छ । पितृसत्तात्मक पुरातनवादी मानसिकता महिलाहरुले नअपनाउनुका कारणले पनि वैवाहिक जीवनमा उतार चढाव ल्याएको छ ।
अहिलेको शिक्षित वर्गको वैवाहिक जीवनमा समझदारी भन्दा वैचारिक द्वन्द्व छ । जहाँ वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ । त्यो वैवाहिक जीवनमा आत्मीयता शून्य हुन्छ । वैचारिक द्वन्द्व भएका वैवाहिक सम्बन्धहरु सम्बन्ध बिच्छेद अर्थात् पारपाचुकेसम्म पुग्छन् ।
५) सञ्चार माध्यम
अहिलेको विभिन्न टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, भिबर, स्काइप विभिन्न सञ्चार माध्यमले पनि वैवाहिक जीवनमा उथल पुथल पारेको छ । अहिलेको समयमा घरको कोठामै बसेर संसार देख्न र संसारका मानिससँग वार्तालाप गर्न सहजै सकिन्छ । अहिलेको आधुनिक समयमा कोही पुरुष होस् अथवा महिला, नयाँ आकर्षण अर्थात् परपुरुष, परस्त्रीतिर झुकाव अर्थात् लगाव भएको देखिन्छ ।
वैवाहिक जीवनमा तनसँगै भए पनि मनचाहिँ अन्तै भागेको अवस्था छ । अहिलेको सञ्चारले अवैध सम्बन्ध जोड्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ
घरमै वैवाहिक सम्बन्धमा रहेर बाहिरी आकर्षणमा वार्तालाप गर्न रुचाउनेको सङ्ख्यामा पनि कमी छैन । अहिलेको केही वैवाहिक जीवनमा तनसँगै भए पनि मनचाहिँ अन्तै भागेको अवस्था छ । अहिलेको सञ्चारले अवैध सम्बन्ध जोड्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ । एक किसिमको विकृति नै भित्र्यायको छ र वैवाहिक जीवनलाई ठूलै दखल पुराएको छ ।
विविध कारणले अहिलेका अधिकांश वैवाहिक जीवन भावनात्मक नभएर औपचारिकतामा सीमित छन् । हाम्रो समाजमा बढ्दै गएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाले झनै हाम्रो समाज कता जाँदै छ ? वैवाहिक सम्बन्धमा बढ्दै गइरहेको असमझदारीले पश्चिमेली संस्कार नभित्र्याउला भन्न सकिँदैन ।
बाबुआमाको बेमेल अर्थात् सम्बन्ध विच्छेदका कारण ससाना लालाबालाहरुले कष्ट भोगिरहेका छन् । बाबुआमा छुट्टिनुको कारण बच्चाहरुको मनोवैज्ञानिक असर परेर कुलतमा लाग्ने सम्भावना बढेको छ ।
हाम्रो समाजमा पारिवारिक बिखन्डन अति नै बढ्दो छ । वैवाहिक जीवनमा आत्मीयता नहुनु भनेको घर बिग्रिनु हो । घर बिग्रिनु भनेको छोराछोरी बिग्रिनु हो । भोलिका कर्णधार बिग्रिनु भनेको समाज बिग्रिनु हो । र, समाज बिग्रिनु भनेको राष्ट्र बिग्रिनु हो ।
त्यसैले यो संवेदनशील विषयमा हामीले समयमै गम्भीरतापूर्वक सचेत हुन अति नै आवश्यक देखिन्छ ।
तपाई कुन बार जन्मनु भयो ? जानकारी लिनुहोस कुन बार जन्मेका मानिसले कति धन सम्पती कमाउन सक्ने ?
श्रावण महिनामा यसरी पुजा आजा गरी मनोकामना पुरा गर्न सकिने, जानकारीका लागि सेयर गरौ
आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबारः देशभरका शिवालयहरुमा भीड
आज श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार, यसरी पुजा पाठ देखी वर्त गरी शिव जी को पुजाआजा…
चमत्कारिक रुपमा धन धर्म र भाग्य चम्काउने यस्ता छन संकेतहरु